Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato u guurista Dubai
Beddelka goobta aad degan tahay had iyo jeer waa hawl adag oo waqti badan qaadanaysa, gaar ahaan marka ay timaado u guurista waddan shisheeye. Imaaraadku waa waddan horumarsan xagga dhaqaalaha iyo tignoolajiyada. Way u furan tahay muwaadiniinta caadiga ah iyo ganacsatada, laakiin wax walba halkan kuma fududa. Isha – https://emirates.estate - ayaa kuu sheegi doona waxyaabaha gaarka ah ee u guurista Imaaraadka.
Tilmaamaha dhaqanka ee Emirates
Heerka sare ee caalamiga ah, dhaqaalaha xooggan iyo xaaladaha ganacsi ee raaxada ah kama dayriyaan xaqiiqda ah in Imaaraadku yahay waddan Muslim ah oo leh caadooyin u gaar ah.
Sharciyada Imaaraadku waa kuwo ku adag qof kasta: gudaha iyo ajnabiga. In kasta oo xaqiiqda ah in la xidhiidha booqdayaasha, waxa ay dhab ahaantii indha indheeyaan waxyaabo badan. Taas macnaheedu maaha in xadgudubyada adagi ay ahaanayaan kuwo aan la ciqaabin. Dadka reer Dubia waxay daacad u yihiin dadka soo booqda, taas beddelkeedana waxay si sax ah u filaysaa ixtiraamka qiyamka maxalliga ah.
Waa maxay rajada ay sugayaan ajaanibka
Ajaanib badan oo UAE ugu guuray deganaansho rasmi ah waxay sheegaan dhowr sababood oo gaar ah. Waxaan soo jeedinaynaa in si fiican loo barto.
Dhaqaale deggan iyo jawi dhaqaale oo wanaagsan. Qodobka fayoobaanta dhaqaale ayaa soo jiidata qayb weyn oo ka mid ah dadka soo haajiray. Heerka sare ee mushaharka, cashuurta dakhliga oo aan lahayn, iyo sidoo kale lacag xasilloon, waxay sameeyaan shuruudaha aad rabto inaad ku dadaasho;
Maalgelinta faa'iidada leh ee hantida maguurtada ah. Qaybta hantida maguurtada ah ee Dubai aad bay u horumarsan tahay. Tan waxa caddaynaya baahida sare, dhaqdhaqaaqa maalgashiga iyo korodhka joogtada ah ee qiimaha. Sidaa darteed, iibsadayaasha hantida maguurtada ah ee maxalliga ah ma helaan oo kaliya hanti aad u wanaagsan oo lagu noolaado, laakiin sidoo kale hanti qiimo leh;
Mushahar sare. Khabiirada takhasuska leh ee Dubai, sida meelo kale, waa la qiimeeyaa, markaa shirkadaha maxalliga ah waxay diyaar u yihiin inay si fiican u bixiyaan;
Hijrada. Waxaa jira dhowr fursadood oo hoos yimaada qofka ajnabiga ah uu ku noqon karo muwaadin Imaaraadka: guurka, waxbarashada dalka, shaqada, gacan weyn oo ku saabsan horumarinta dalka iyo maalgashiga hantida maguurtada ah;
Ammaanka sare. Imaaraadku waxay qabsadeen 3rd dhanka amaanka, halka Dubai ay ku jirto kaalinta 8-aad ee magaalooyinka ugu amaanka badan caalamka.
Yaa loo ansixin doona tallaabadaas
Waxaa loo ansixin doonaa qof kasta oo maalqabeen ah, ma jiro wax dambi ah iyo taariikh credit oo wanaagsan.
Waa maxay heerka nolosha ee Dubai
Dubai waa magaalada ugu horeysa dhanka mushaharka, sidoo kale waa magaalada ugu qanisan Emirates. Qiimaha hantida ma-guurtada ah ee Dubai waxay ka bilaabataa USD 3,000 ilaa USD 8,100.
Si aad u iibsato hanti ma-guurto ah oo ku taal UAEMa xiiseyneysaa hanti iib ah oo ku taal Imaaraadka? Ka raadi guri riyo ah boqollaal doorasho oo ku yaal mareegta Emirates.Estate. Halkan waxa aad ka heli doontaa kaliya soo jeedinta ugu fiican ee milkiilayaasha la xaqiijiyay iyo horumarinta waaweyn ee UAE. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan guuritaanka iyo iibsashada hantida ma-guurtada ah ee Dubai, fadlan la xidhiidh maamulaha shirkadda.